QM oo ugu baaqday Maamulada Somaliland iyo Puntland in ay ka wada hadlaan xasaradaha ka jira Gobalka Sool. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA QM oo ugu baaqday Maamulada Somaliland iyo Puntland in ay ka wada...
QM oo ugu baaqday Maamulada Somaliland iyo Puntland in ay ka wada hadlaan xasaradaha ka jira Gobalka Sool.
Ergeyga ugu sareeya ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa ku baaqay daganaansho iyo wada hadal Somaliland iyo Puntland.
Isagoo joogo magaalada Hargaisa oo xarun u ah Somaliland ayuu yiri Michael Keating “ waa in la yareeyaa xiisadaha lana kordhiyaa wada hadalka si dhakhso ah, waana in la cadeeya isfaham la’aanta jirto”.
Ergeyga Qaramada Midoobey ayaa ka hadlayey shir jaraa’id oo uu ku qabtay Hargeysa ayuu uga hadlay kulankii dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, kaas oo diiradda lagu saaray sidii looga wada shaqeyn lahaa degnaashaha iyo xasillnooda guud ee mandaqadda.
Horraantii toddobaadkan, waxaa jiray isku dhacyo dhexmaray ciidamada ammaanka gobolka Sool oo ah meelaha lagu muran san yahay.
Waxayaabaha la isku soo qaaday waxaa ka mid ah haab dhismeedka iyo shaqooyinka hor yaalla golaha wasiirrada cusub, taas oo u baahan in la iska kaashado sidii loo dhaqaajin lahaa howlaha soo socda.
Ergayga QM ayaa sidoo kale la kulmay wasiirro dhowr ah oo ka tirsan golaha wasiirrada Somaliland isagoo kala hadlay arrimaha waxbarashada, caafimaadka, amniga, saameynta abaarta iyo shaqada yarida sidii looga gudbi lahaa, iyadoo Qaramada Midoobay taageero laga helayo.
Previous articleAgaasimaha Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Dowladda dhexe Ee Soomaaliya oo Booqday Xarumaha Hey’adda Ee Boosaaso.
Next articleGaalkacyo oo laga hir-gelinayo Garsoor ciidan oo ka madax banana Maamulada Galmudug iyo Puntland….